अनिल यादव - साप्ताहिक
राहत बाड्न निस्किएका कलाकार कामेश्वर चौरसिया प्रहरी नियन्त्रणमा
अनिल यादव, चैत्र २२, २०७६
​​​​​​​राहत बाड्न निस्किएका कलाकार कामेश्वर चौरसियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । हेटौंडाबाट पर्सास्थित सखुवा पर्सौनीमा रहेका लोपन्मुख उराव समुदायलाई राहत वितरण गर्न हिडेका उनीसहित थप चार जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय पर्साले राहत बाँड्न नदिई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
निश्चलको ‘लकडाउन लाइफ’ कसरी चलिरहेको छ त ? कोरोना र लकडाउनकै सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्न निश्चललाई फोन सम्पर्क गर्दा सुरुमा उनी पन्छिन खोज्दै थिए, ‘के गर्नु यार यो विरक्तलाग्दो गफ ।’ । तर, कुराकानी सुरु भएपछि उनले आधा घन्टा बितेको पत्तै पाएनन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको लकडाउन संवाद :
अनिल यादव, चैत्र २०, २०७६
लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै फुर्सदको समय पनि लम्बिँदै गइरहेको छ । पुस्तक पढ्नेहरूका अगाडि पुस्तकको सूची लम्बिरहेको छ, फिल्म पारखीहरूका अगाडी फिल्मको सूची । र, लकडाउनसँगै हामीले पनि फिल्मकर्मीमार्फत फिल्म सिफारिस गराउने क्रम रोकेका छैनौं । आज हामीसँग फिल्म सिफारिस लिएर उपस्थित छिन्, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त ।
प्रकाश सपुतको लकडाउन डायरी: ब्याक टु भिलेज लाइफ
अनिल यादव, चैत्र १८, २०७६
त्यसपछि चाहिँ मनमा चिसो पस्यो र चाइनामा फैलिरहेको यो रोगले सीमापार गर्न सक्ने संकेतसमेत बुझियो । कोरियाको कार्यक्रम भव्य भयो । फर्केर हङकङको कार्यक्रम गर्नुपर्ने । मनमा डर पैदा भयो । डर २ वटा थियो । एक कार्यक्रम स्थगित हुने हो कि ! अर्को हामीलाई पनि केही हुने हो कि !
अनिल यादव, चैत्र १५, २०७६
पत्रकारिता हुँदै फिल्म निर्देशनमा हात हालेका दीपेन्द्र लामा नेपाली फिल्म क्षेत्र र दर्शकका अघि फिल्म समीक्षकका रूपमा परिचित थिए । फिल्म निर्देशनमै सक्रियता देखाइरहेका लामा अहिले सिनेमा हेरेर आफ्नो फुर्सदको समय सदुपयोग गरिरहेका छन् । उनले दर्शकका लागि आफूलाई मनपरेका पाँच सिनेमा सिफारिस यसरी गरे ।
अनिल यादव, चैत्र १४, २०७६
अहिले घरमै बसेर फुर्सदको समयलाई सिर्जनात्मक हिसाबले सदुुपयोग गरौँ भन्नेहरुका लागि पुस्तक र सिनेमा उपयुक्त विकल्प हो । त्यसैले हामी अहिले विभिन्न कलाकार र निर्देशकहरुसँग कुराकानी गर्दै पाठकसामु दिनहुँ नयाँ–नयाँ सिनेमाको सिफारिससहित उपस्थित भइरहेका छौं ।